The wadaad hore ee Pentecostal Michael Karlendal tago Church Catholic | Apg29
Isagu ma uu islaamay, maxaa yeelay of xukun kitaabiga ah, laakiin sababo taariikheed. Horeba this waa in nalalka digniinta soo jeedin cas.
Ma aha in aad rumaysan tahay in galaya, waayo, ma uu idiin badbaadiyo. Mana badbaadiyay Protestant, laakiin rumaysadkiinna xagga Rabbi Ciise Masiix badbaadiyay.
Leaving Church Catholic
The wadaad hore ee Pentecostal Michael Karlendal, oo diinta si Church Catholic ee 2016, oo haatan ka qaxay kiniisadda. In a post dheer oo uu blog , wuxuu sharxayaa sababta - blog la mid ah in uu hore u difaacay iyo faafin iimaanka Catholic.
In post dheer, ayuu qoray wargayska, waxyaabo ay ka mid, sababta uu u noqday Catholic ah. Waxa uu u maleeyay in Church Free waxay ahayd taariikh-iyo, Sidaa darteed, baaritaan ah "xididada taariikhiga ah" in Church Catholic ah. Oo halkan wax la yaab leh. Wuxuu qorayaa on inuu blog:
"Waxa aan ahaa sababaha kitaabiga ah in ka dhigay in aan noqday Catholic ah, xataa haddii aad ka akhrin kartaa Kitaabka Quduuska ah si ay iswaafajinaysaa la soo galaya, laakiin waxa uu ahaa sababo la sifaynayo taariikhi ah."
Waxa uu diinta aan sababta oo ah xukun kitaabiga ah, laakiin by sababaha taariikhiga ah . Horeba this waa in nalalka digniinta soo jeedin cas.
Waa maxay iimaanka xagga badbaadinta?
Ka dib mar kale barashada taariikhda, ayuu beddelay fekerkiisa iyo gabagabeeyey in Church Catholic uusan heshiin ma.
"Oo waxaan haatan u tagay qaabka Catholic iyo mar kale qabaa sida Protestant ah."
i si ay u muuqataa wax qariib ah in ay ka fekeraan kaliya Protestant mar kale ka dib markii fekerayo in Catholic ah dhowr sano. (Haddii aadan erayga ma oga qaabka lagu sharaxay halkan iyo halkan .)
Waxaa ku saabsan inay doortaan galaya ama Protestant ma aha. Waa dhan adiga kugu saabsan, Ciise ama ma.
Waa maxay sababta uu kiniisadda bedelay
Waxaan u qoray email ah oo ka yaabay, haddii ay ahayd xaq oo dhan si ay u daabacaan maqaal isaga ku saabsan on apg29. Waxa uu ku jawaabay in ay si fiican u tegey oo ka dib markii aan akhriyey maqaal qabyada ah, uu la yimid qaar ka mid ah sharaxaad dheeraad ah sababta uu kiniisadda bedelay.
"Aniga ahaan, waxan oo dhan ayaa had iyo jeer ahaa arrin soo socda Ciise iyo doonaysaan inaad samaysaan doonistiisa. Marka waxaan u noqday Catholic ah, waxa ay aheyd sababtoo ah waxaan lahaa ka dibna u yimid inuu xukun ah in Church Catholic ah run ahaantii ahaa kaniisadda in kaliya Ciise aasaasay jidhkiisa fudud, ka dibna waxa uu noqon lahaa si caddaalad ah oo macquul ah in sida kuwa Ciise raaca doonayaan in ay qayb ka mid ah waxa Ciise ayaa aasaasay noqon.
Hadda waxaan ogaaday in aan qalad ka hor ahaa. Ciise ayaa aasaasay shirka ah, iyo shirka ayaa si tartiib tartiib ah Ahaysiinay Gaarna urur iyo caqiido. Laakiin ma jiro oo ka mid ah laamaha kiniisadda hadda kala qaybsan masheegan karaan in ay xididka asalka ama stem. Ka dib markii Ciise macnaheedu kartaa in aad leedahay si ay u hoggaansamaan ah madaahibta gaar gaar ah. "
Waxa aan fahamsanahay waa Michael Karlendal aad u barteen, si fiican u akhri oo caqliga, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay aaminsan yihiin in Ciise iyo aadna ku badbaaddeen. Haddaad leedihiin rumaysad fudud Kitaabka Qudduuska ah in Rabbi Ciise, ma waxaad ka raadin ah "kaniisadaha taariikhi ah" si aad u hesho xaq, maxaa yeelay, markaas waa inuu hagaagsan.
si loogu badalo
Waxaan dhaqmayso in sida isagoo Masiixi ah si loogu badalo si Church Catholic ah. Ma wax wanaagsan samaysaan ma Christian (qofka waa la badbaadiyey) a badalo (toobad keena) si kaniisad? Waxaad u toobad keenaan in Ciise iyo ma kaniisadda a.
In uu reply ii qabtay wuxuu ahaa Michael Karlendal ila in aan view of erayga "badalo".
"Sida erayga" badalo "Waxaan aad la isku raacsan yihiin in loo isticmaalo hab la yaab leh. Dhab ahaantii, waxaa loola jeedaa Warega, iyo sameeyaa waa kaliya in ay Ciise. Laakiin waa in aan la soco in hadalka lagu maanta loo isticmaalaa hab la yaab leh in xaalado gaar ah oo markii macnaha ka duwan dareen kitaabiga ah. "
Waxaa fiican in Michael Karlendal fahmaan in uusan ka heli kartaa jawaabta uu ka raadinaya Church Catholic ah. kuwa kale waxaa laga yaabaa in sidoo kale fahmi this kuwaas oo isaga raacay in uu search. Jawaabta waxaad ka heli doontaa oo kaliya in Rabbi Ciise Masiix.
Iyo marka aad hesho qof ku nool Ciise Masiix oo Rabbiga ah noloshooda ah waxay ka heli xaq iyo jawaabaha helay!
Maqaalkani waxa aan loogu tala galay in joognaa Mikael Karlendal bartey (uu yahay tirada guud), laakiin waxaa laga yaabaa waxtar u leh dadka la dhibtoonayo dhibaato sida si aanay qalad noqon doonaa.
Noqo ku faraxsan yahay, waayo, Michael Karlendal. Waa geesi ah oo daacad ah sameeyey si dhiirran u qirtay inuu qalad ahaa.
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 03:07